Toromarika amin'ny fampiasana raokandro • AoRaha
‘ Afaka sorohana amin’ny alalan’ny fampiasana an’ireo karazana zava-maniry eto amintsika ny aretina Coronavirus ‘. Io no toromarika nataon’ireo mpampianatra mpikaroka ao amin’ny fakiolten’ny siansa eny amin’ny oniversiten’Antananarivo, omaly.
Maro amin’ireo zava-maniry eto amintsika no hahafahana mampitombo ny hery fiarovan’ny tsirairay. ‘ Azo atao ny mampiasa ireny ravina voaroy hazo ireny. Ao daholo ireo singa rehetra hahafahan’ny vatantsika miaro amin’io aretina io ‘, hoy ny profesora Rasoanaivo Lea, mpitantana ny sampam-pikarohana momba ny zava-maniry ao amin’ ity fakiolte ity.
Toromarika nomen’ireo mpampianatra mpikaroka ihany koa ny fanaovana evoka ravintsara sy sakamalao. Eo ihany koa ny fihinanana sakafo maro karazana misy ‘fer’ sy ‘zinc, ny spiruline..’ . Azo ampiana amin’ny fievohana sy fandomana ny tongotra amin’ny ranomafana.
Fivoahana eto Antananarivo :: Maro ireo fangatahana alalana manokana nolavina